Samsung Unpacked: Kani waa Galaxy S10 iyo aalado kale | War gadget
Samsung Unpacked: Kani waa Galaxy S10 iyo qalabka intiisa kale oo la bilaabay
"Maalintii weyneyd" ee shirkadda Kuuriyada Koonfureed way timid, waanu soo galnay si toos ah u soo bandhigga Galaxy 10 cusub mahadnaqa #Unpacked oo lagu qabtay MadridSi kastaba ha noqotee, taleefanka sare ee Samsung maahan waxa kaliya ee la soo bandhigay, waxaan leenahay dagaal wanaagsan oo ah qalab cusub sida kan Samsung Galaxy Fold, taleefanka cusub ee laaban karo, xafiiltanka cusub ee Airpodyada leh Galaxy Buds iyo dabcan laba nooc oo cusbooneysiiyay ka mid ah Galaxy Watch Explorer iyo GalaxyFit.
Nala joog si aad u ogaato waxa ay yihiin aaladahaan cusub ee Samsung ay rabto in ay gebi ahaanba ku guuleysato suuqa, iyo ogow qiimaheeda iyo astaamaheeda ugu dambeeya.
1 Galaxy S10, Galaxy S10 + iyo Galaxy S10e, qiimaha iyo muuqaalada
2 Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qoyska Galaxy S10
3 Samsung Galaxy Buds, tartamayaasha cusub ee AirPods
4 Samsung Galaxy Active iyo Galaxy Fit iyo Galaxy Fit E
Galaxy S10, Galaxy S10 + iyo Galaxy S10e, qiimaha iyo muuqaalada
Sidee ayey noqon kartaa haddii kale, doorka intiisa badan waxaa qaata taleefannada shirkadda South Korea. Munaasabadan, sida Apple oo kale, ragga Samsung waxay doorteen inay soo bandhigaan seddex cabbir oo kala duwan oo calankooda ah, si kastaba ha noqotee, waxaa lagu dalbadaa cabir ahaan iyo astaamo. Waxay u badan tahay Samsung Galaxy S10 + oo leh 6,4 inji oo wadaaga astaamo isku mid ah Samsung Galaxy S10Marka laga reebo awoodda batteriga oo sare, nooc dhoobada gaar ah oo leh illaa 1 TB kaydinta iyo 12 GB oo RAM ah. Intaa waxaa dheer, wajiga labaad ee kala geddisnaanta weyn ee Galaxy S10 + wuxuu noqon doonaa a kamarad hore.
Screen 6.4 inji 3.040 × 1.440px qaraar 6.1 inji 3.040 × 1.440px qaraar 5.8 inji 2.280 × 1.080px qaraar
Muuqaal gadaal Triple 12 Mpx (furitaanka isbeddelka f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2) + 12 Mpx (f / 2.4) oo leh OIS Triple 12 Mpx (furitaanka isbeddelka f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2) + 12 Mpx (f / 2.4) oo leh OIS Labalaab 12 Mpx (furfurnaan f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2)
Kaamirada hore Labo jeer 10 Mpx (f / 1.9) + 8 Mpx (f / 2.2) 10 furitaanka Mpx f / 1.9 Labalaab 12 Mpx (furfurnaan f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2)
Hagayaasha Exynos 9820 iyo QS855 Exynos 9820 iyo QS855 Exynos 9820 iyo QS855
Kaydinta 128/512/1 Qaaxada 128 / 512 GB 128 / 256 GB
Batariga 4.100 Mah 3.400 Mah 3.100 Mah
Ampliación microSD ilaa 512 GB microSD ilaa 512 GB microSD ilaa 512 GB
Cabbiraadaha X x 157.6 74.1 7.8 mm X x 149.9 70.4 7.8 mm X x 142.2 69.9 7.9 mm
Peso Gram 175 Gram 157 Gram 150
kuwa kale Shahaadada IP68 - Akhristaha faraha faraha shaashadda hoostiisa - Lacag Bixin Bilaash ah oo Bilaash ah 2.0 iyo Lacag-celinta Dib Looga Beddelayo Shahaadada IP68 - Akhristaha faraha faraha shaashadda hoostiisa - Lacag Bixin Bilaash ah oo Bilaash ah 2.0 iyo Lacag-celinta Dib Loogu Noqon Karo Shahaadada IP68 - Akhristaha sawirka faraha
Qiimaha 1009 € 909 € 759 €
Qeyb ahaan, Galaxy S10e ayaa na siin doonta guddi 5,8-inji ah iyo kamarad gadaal laba-laab ah, oo ka duwan kamaradda saddex-geesoodka ah ee lagu muujiyay Galaxy S10 iyo Galaxy S10 +. Waxay ku soo beegmayaan markooda astaamaha intiisa kale, marka laga reebo inay jiri doonto daabacaad yar oo jaban oo yeelan doonta 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah, inkasta oo aan ku dooran karno nooca 256 GB oo keyd ah iyo 8 GB oo RAM ah haddii aan rabno. Batariga, arrimaha cabirka awgood, ayaa sidoo kale u dhaca 3.100 Mah marka loo eego 3.400 mAh ee walaalkeed ka weyn, laakiin waxay ku soo beegmayaan astaamaha ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, si loo sameeyo cutub ka raqiisan, Samsung waxay markan la socotaa akhristaha shaashadda shaashadda, isagoo u dhaqaaqaya inuu dhigo dhinaca jirkiisa.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qoyska Galaxy S10
Waa inaanu sheegnaa xaqiiqda ah in Samsung ay go'aansatay inay ku sharraxdo akhristaha shaashadda shaashadda ee Galaxy S10 iyo Galaxy S10 Plus, iyadoon loo eegin nooc kasta oo ka mid ah qaab-dhismeedka, oo kaliya looga tagayo "freckle" meesha aaladda ku taal ku yaal. Dareeraha kamaradda hore ee Galaxy S10, labalaab dareemaha kiiska Galaxy S10 Plus. Si kastaba ha noqotee waxay ku soo beegmayaan xallinta shaashadda labadaba Galaxy 10 iyo Galaxy S10 Plus labadaba waxay bixiyaan guddi Dynamic AMOLED leh 3.040 x 1.440 px, taasi waa in la yiraahdo qaabkeeda 6,4-inji sida ku jirta daabacaaddeeda 6,1-inji.
Samsung waxay haysaa furitaanka isbeddelka kamaradda, markan ku darista seddex dareemayaal kamaradda gadaal, 12 Mpx (Muuqaalka isbeddelka f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2) + 12 Mpx (f / 2.4) oo leh OIS si markaa aynaan gebi ahaanba waxba uga maqnayn. Taabadalkeed, kaamirooyinka hore ee Galaxy S10 + oo leh laba dareemayaal waxay ka kooban yihiin 10 Mpx (f / 1.9) + 8 Mpx (f / 2.2), halka Galaxy S10 ay ku hartay oo kaliya 10 Mpx sensor.
Akhristaha sawirka faraha ayaa ku dhexjira shaashadda (dhinaca Galaxy S10e)
Lacag-la'aantu dib-u-rogid wireless si ay ugu soo dallajiso aaladaha kale
Lacag Bixin Bilaash ah oo Bilaash ah 2.0
IP 68 iska caabbinta biyaha iyo boodhka
Heerka processor-ka waxaan ka heli doonnaa had iyo jeer laba nooc, mid leh kan Awood-sareeya Qualcomm Snapdragon 855, iyo midka hubaal ahaan imaan doona Spain, taas oo ah Exynos 9820 oo ay soo saartay shirkadda Samsung lafteeda. Heerka keydinta waxaan udhaxeyn doonaa inta udhaxeysa 128 GB iyo 1 TB, halka dhanka RAM aan udhaxeyn doono 6 GB oo uu bixiyo nooca S10e, iyo 12 GB nooca dhoobada ee Samsung Galaxy S10 Plus. Waxaan ku dhammeyneynaa qaar ka mid ah wararka ugu habboon ee aan lagu waayi karin terminal sidan ah:
Isla sidaas ayaa ku dhacda heerka ismaamul, halka Galaxy S10 + aan ku gaari doonno xaddiga aan la tixgelin karin ee 4.100 Mah, oo ay weheliyaan Galaxy S10 oo yeelan doonta 3.400 mAh iyo Galaxy S10e oo kaliya 3.100 mAh taas oo shaki naga dhigi doonta waxqabadka guud, in kasta oo loo malaynayo in Galaxy S10 + Waxay noqon doontaa guuleyste cad oo arrintan la xiriira, halkaasoo Samsung waligeed si gaar ah u istaagin.
Samsung Galaxy Buds, tartamayaasha cusub ee AirPods
Samsung waxay mar kale cusbooneysiineysaa noocyadeeda kala duwan ee sameecadaha dhabta ah ee loo yaqaan 'True Wireless headphones' oo leh naqshad aad u xusuusinaysa daabacaadyadii hore. Waxaan aragnay aragtida koowaad ee Samsung Galaxy Buds, sameecado yaryar oo dabcan yeelan doona kiish ay wataan iyo naqshadeynta jilicsan ee Samsung badanaa ku dheji qalabkaaga.
Qiimaha: € 129
Taariikhda sii deynta: Maarso 2019
Heerka naqshadeynta, waxay go'aansadeen inay calaamadeeyaan xoogaa waxa tartanku bixiyo, iyagoo diiradda saaraya abuuritaanka qalab aad u kala duwan. Markan waxaan dooran karnaa daabacaad cad iyo mid kale oo madow ah oo Samsung Galaxy Buds ah taasi waxay hubaal ka farxin doontaa adeegsadayaal badan.
Samsung Galaxy Active iyo Galaxy Fit iyo Galaxy Fit E
Samsung sidoo kale ma seegin fursad ay ku cusboonaysiiso noocyadeeda kala duwan ee saacadaha casriga ah, waxaan heleynaa Samsung Galaxy Firfircoon oo ku bixisa taajka moobiilka iyo qaabka, si loogu daro dhammaan shaashadda shaashadda oo leh wareeg gebi ahaanba wareega ah oo lagu bixin doono midabada kale ee qalinka iyo casaanka leh silsiladaha silikoonka. Waxay yeelan doontaa astaamaha saacadda ee shirkadda South Korea iyo naqshad aad u fiican oo si fudud loo xidho.
Price: Laga soo bilaabo 99 €
Taariikhda lagu sii daynayo: Maarso 2019
Laba cusbooneysiin loogu talagalay jijimooyin naqshadeeye leh shaashad muuqaal iyo silsilado xarkaha leh, Loogu talagalay inay yihiin kuwa ugu fiican suuqa shaqooyinka iyo astaamaha, bedelida kala duwanaanshaha Galaxy Gear Fit Pro iyo Galaxy Gear Fit. Shaki la'aan laba aaladood oo wanaagsan oo lagu bilaabi doono qiimo jaban sida ku dhacday noocyadii hore oo si wax ku ool ah u soo jiitay dhagaystayaasha xaadirka ku ahaa bandhigga.
Tanina waxay ku saabsanayd dhammaanba #Maalin ee Samsung oo maanta loo dabaaldegay 20-ka Febraayo taasna waxay nooga tagtay xargo qalab wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Samsung Unpacked: Kani waa Galaxy S10 iyo qalabka intiisa kale oo la bilaabay
Kani waa Galaxy Fold, Samsung oo ah taleefanka casriga ee isku laaban
Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE iyo Xiaomi Mi 9 Daabacaad Transparent: qeexitaannada, qiimaha iyo helitaanka